Wasaaradda Awqaafta Soomaaliya oo sheegtay in ay dib usoo nooleynayso Masaajidda Taariikigiga ah ee Dalka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda Awqaafta Soomaaliya oo sheegtay in ay dib usoo nooleynayso Masaajidda Taariikigiga...
Wasaaradda Awqaafta Soomaaliya oo sheegtay in ay dib usoo nooleynayso Masaajidda Taariikigiga ah ee Dalka
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha Diinta Soomaaliya, Cismaan Aadan Dhuuboow ayaa sheegay in Wasaaraddiisu ay xoogga ay saareyso dib usoo celinta Masaajidda Taariikhiga ah ee Dalka.
Wasiir ku xigeenka ayaa hadalkan sheegay mar uu Xalayto booqday Masjidka Faqrudiin oo ku yaalla Degmada Shingaani ee Gobolka Banaadir, isagoo Bulshada Soomaaliyeed ku boorriyay ka qeyb qaadashada kheyrka.
Agaasimaha Waaxda Diinta ee Wasaaradda Awqaafta, Sheekh Cali Sheekh Maxamuud (Sheekh Cali dheere), ayaa sheegay in Masjidkan uu kamid yahay goobaha Taariikhiga ah, isagoo Ummadda Soomaaliyeed iyo Dowladduba ugu baaqay in laga qeyb qaato dhismahiisa.
Sheekh Shaafici Sh Maxamed, oo ka mid ah maamulki hore ee Masjidka ayaa sheegay in Masjidkani la dhisay 7 Qarni ka hor, isla markaana loo baahan yahay in dib u dhis weyn lagu sameeyo maaddaama uu bur-bur xooggan kasoo gaaray dagaalladii sokeeye ee Dalka ka dhacay.
Previous articleWasiir ku xigeenka Waxbarashada XFS oo gaaray Balad Xaawo
Next articleDhaqaatiirtii ugu horeyaay oo u anba baxay degaannada ayaxu ku dagay ee gobolada dhexe